Hidden Bagan Photography Tour – Lodggy
📸 📸Your Hidden Bagan – Photography Tour Package📸📸
🌧☔️MONSOON PROMOTION 🌈🌦
(1st July 2019 – 30th September 2019)
ပုဂံ ရဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတဲ့ နေရာများစွာထဲကမှ လူများသွားရောက်လည်ပတ်မှု နည်းပါးတဲ့ ဘုရားတွေ၊ အုတ်တိုက်တွေမှာ ဓာတ်ပုံအမိုက်စားတွေ ရိုက်ချင်တဲ့သူတွေ / လည်ပတ်ချင်သူတွေအတွက် ဘုရားလည်းဖူးရင်း ဓာတ်ပုံအမိုက်သားတွေရိုက်ဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ photo shoot tour လေးဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံးရက် ကိုတော့ လေဆိပ်/ ကားကွင်းမှာ လာကြို ပါမယ်.. ဟိုတယ်မှာ check-in လုပ်ပြီးတာနဲ့ မနက်စားသောက် ဖို့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို ခေါ်သွားပေးပါမယ်။ စားသောက်လို့ ဗိုက်ပြည့်ပြီဆိုရင် day 1 photo shoot tour စတင်ပါမယ်။ ပထမဆုံး photo shoot ဖို့လုပ်ထားတဲ့ hidden spot နေရာလေးတွေခေါ်သွားမယ်/ စိတ်ကြိုက်ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးမယ်.
ပြီးရင် နေ့လည်စာစား ဖို့ခေါ်သွားမယ်.. စားသောက်ပြီးရင် ဟိုတယ်မှာည ခဏပြန်နား / ညနေပြန်ထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ပေးပါမယ်။ ညနေဘက်မှာတော့ ဘုရားတစ်ဆူရဲ့ အတွင်းဘက်မှာ သေချာစီစဉ်ထားတဲ့ indoor setting shoot နဲ့ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးပါမယ်။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က ဘုရားတွေပတ်ဖူးရင်း ညနေ sunset ကြည့်ဖို့နေရာကိုခေါ်သွားပါမယ်။ ပထမနေ့လေးကိုတော့ sunset ကြည့်ရင်း အဆုံးသတ်ပါမယ်။
မနက်စောစောထပြီး sunrise ကြည့်မယ်။ ပြီးတာနဲ့ဟိုတယ်ပြန်ပြီးမနက်စာစားပြီးရင် ပုဂံမြို့သစ်တဝိုက်ကနေရာတွေကိုသွားမယ်။ နေ့လည်စာအနေနဲ့ Community Based Tourism ရွာမှာချက်ကျွေးတဲ့ အညာစာစစ်စစ်ကိုစားရင်း အညာဓလေ့ကိုလေ့လာလို့ရပါမယ်။
တရေးတမောနားလို့ပြီးရင် ညနေပြန်ထွက်တဲ့အခါ indoor shoot တခုလုပ်မယ်။ညနေကို ဧရာဝတီမြစ် သောင်တနေရာ သဲဖြူဖြူလေးပေါ်မှာ sunset picnic ပုံစံမျိုး ဓါတ်ဖမ်းရင်းနဲ့ sunset အလှကိုခံစားရပါမယ်။
နောက်ဆုံးနေ့ကိုတော့နားနားနေနေပဲ ဓါတ်ပုံလဲရိုက်ရင်း ပုဂံပြန်လက်ဆောင်ပဲသွားဝယ်မလား၊ အနှိပ်ပဲသွားခံမလား၊ ထန်းရည်ဆိုင်သွားချင်လား လိုက်ပို့ပေးပါမယ်။
ဒီခရီးစဉ်က ဓာတ်ပုံချည်း ရိုက်တာမဟုတ်ဘဲ ပုဂံနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ သမိုင်းတွေ နံရံဆေးရေးပန်းချီအကြောင်း ဘုရားစေတီတွေဘယ်လို အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလာပြီး ပုဂံခေတ်လူနေမှုအဆင့်အတန်းတွေ ဘယ်လိုတိုးတက်ဖွံဖြိုးခဲ့သလဲ ပုဂံရဲ့ unique pagodas တွေကိုပါ လေ့လာရမှာမို့
ဒီခရီးစဉ်လေးက သင့်အတွက် အမြဲအမှတ်ရနေမှာ အသေအချာပါ 😁
⁃ Photography and Guide Service
– တယောက်ချင်းစီအတွက် ဓါတ်ပုံ soft copy ပုံ ၅၀
⁃ 3/4 Star အဆင့် Hotel မှာ ၂ည တည်းခိုခွင့်
⁃ Car for3Days
⁃ Airport/Bus Station အကြို၊အပို့
⁃ ရွာမှာချက်ကျွေးမဲ့ နေ့လည်စာ
⁃ Sunset Picnic (အအေးနဲ့ snack)
– အထက်တွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသော meals
– photo edit အတွက်သီးသန့် editing charge ကောက်ခံပါမည်။
3 Star Hotel နဲ့ ဆိုရင်
VIP Bus နဲ့ အသွား/အပြန် – 299,000 (per person)
Flight နဲ့ အသွား/အပြန် – 339,000 (per person)
*ဒီဈေးတွေက September လကုန်အထိပဲနော်…
4 Star Hotel နဲ့ ဆိုရင်
VIP Bus နဲ့ အသွား/အပြန် – 319,000 (per person)
Flight နဲ့ အသွား/အပြန် – 359,000 (per person)
* above prices are for local only, pls contact us for more details concerning foreigners.
အနည်းဆုံး လူဦးရေ ၂ ယောက်ရှိရင် သွားလို့ရပြီလေ
ဒီ Tour ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် lodggy နဲ့ booking တင်ဖို့ 09 4444 38366 ကိုဆက်သွယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ htoohtoo@lodggy.com ကိုဆက်သွယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Booking အမြန်တင်လိုက်ပါ။